Macluumaad iyo Xogo Ku Saabsan Qanjidhka Prostate-ka. Qaliinkii: Sadam Osman Kaabash. | Hargeysa World~Herald
UncategorizedMacluumaad iyo Xogo Ku Saabsan Qanjidhka Prostate-ka. Qaliinkii: Sadam Osman Kaabash.
Qanjidhka “Prostate” waa xubin ka mid ah, qaybna kamid ah habdhiska taranka ee ragga. Saynisyahanadu ma hubaan, welina may caddayn waxa saxda ah ee keena kansarka ku dhaca qanjidhka prostate-ka. Laakiin waxay heleen asbaab saamayn kuyeelata , kana qayb qaadata in qanjidhka prostate uu ku dhaco kansar. Ragga inta badan ay la soo deristo xanuunka ku dhaca kansarka qanjidhka prostate, waxa u fudud in ay qaadaan caabuqyo kale.